Myanmar Defence Weapons: ပုံစံ-၈၇ ၁၀၅မမအမြှောက်ပါ တင့်ဖျက်ယာဉ်များ
sanaythar June 30, 2012 at 12:05 AM
ဗဟိုလေထိုးစနစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးပါလဲခင်ဗျာ။ အကိုများရှင်းပြပေးပါဦး။
KThett June 30, 2012 at 2:43 AM
design ka tot amphibious ne` tu tal . hote lar bya .dmhar a` dar myo bal lout shi lal bya .Amphibious so yin tot btr3 tway ne` twal p BD boder mhar use mal so taw tawathone win mal htin tal.(sorry for burglish , I can't type in myanmar)
MM July 1, 2012 at 10:38 AM
unknown: ဗဟိုလေထိုးစနစ် (Central Tire Inflation System) ဆိုတာက လမ်းရဲ့မျက်နှာပြင် surface ပေါ်မူတည်ပြီး ဘီးရဲ့လေဖိအား အပြင်း(အမာ)/အပျော့ကို ယာဉ်မောင်းကနေ ထိန်းချုပ်လို့ရအောင် လုပ်ထားတဲ့စနစ်ပါ
unknown: ဘီးရဲ့လေဖိအား တအားများနေမယ် (တအားမာနေမယ်)ဆိုရင် ချိုင့်ခွက်ကုန်းကမူပေါများတဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းမျက်နှာပြင်တွေမှာ ယာဉ်သွားလာတဲ့အခါ ယာဉ်ဟာ ခုန်ပေါက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်... ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုစတဲ့ အန္တရာယ်လဲ တအားများပါတယ်
unknown: အဲဒီလိုလမ်းမျိုးမှာ ဘီးရဲ့လေဖိအားကို လျှော့ချပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့် (ဘီးလေပျော့သွားတဲ့အခါ) တော်ရုံတန်ရုံ ချိုင့်ခွက်ကုန်းကမူတွေမှာ ကားရဲ့သွားလာမှု Stability ကို တည်ငြိမ်အောင် ထိန်းပေးလိုက်တဲ့သဘောပါပဲကိုစနေသားရေ...
unknown: အဲဒီလို လျှော့ပေးလိုက်တဲ့အခါ ကားဟာ ကားတိမ်းမှောက်တာတို့ဘာတို့လဲ ဖြစ်နိုင်ချေ တအားနည်းသွားတာပေါ့ဗျာ
unknown: အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ ဒီမှာပါ ကိုစနေသားရေ... (http://en.wikipedia.org/wiki/Central_Tire_Inflation_System)
(ကိုunknownရေ ဒီထဲထည့်ပေးထားတယ်ဗျို့.... :D )
sanaythar July 1, 2012 at 10:14 PM
ကျေးဇူးပါ ကို MM ခင်ဗျား။ တစ်လက်စတည်းတစ်ခုလောက်ထပ်ရှင်းပြစေလိုပါတယ်။ ဒီလိုပါ။ CTIS ဘီးရဲ့လေဖိအားကို ယာဉ်မောင်းက လျှော့ချလိုက်ပြီဆိုပါတော့ခင်ဗျာ။ လေလျော့သွားပြီပေါ့။ သွားရင်းနဲ့ လေတင်းတင်းနဲ့သွားရမယ့်လမ်းမျိုးရောက်ရင် အလိုအလျောက်လေပြန်တင်းလို့ ရနိုင်ပါသလား။ Air Compressor ပါတစ်ပါတည်းပါဝင်သလိုမျိုးလားလို့ပါ။ Link ကိုလည်းကြည့်ပါတယ်။ မရှင်းလို့ပါ။ ကို unknown လည်း အခုရှင်းပြတာကို ကျေးဇူးပါခင်ဗျား။